Inona avy ireo Mac be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny fanabeazana? | Avy amin'ny mac aho
Ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny fanabeazana dia zava-dehibe. Ity sehatra ity dia mety hivadika ho "voan'ny" mpampiasa maro izay misafidy Mac ho an'ny fiofanana azony ary lasa marika solosaina amin'ny fiainany, manome fitohizan'ny fiainany matihanina sy manokana.
Androany dia fantatsika ny fijoroana ho vavolombelona ananan'i Bradley Chambers, izay manampahaizana manokana amin'ny fitaovana fanabeazana natolotry Apple. Ny Chambers dia niasa ho an'ny tontolon'ny fampianarana an'i Apple nanomboka ny taona 2009 ary manana traikefa lehibe amin'ny fitantanana Mac sy iPad an-jatony amin'ny tamba-jotra fanabeazana. Ho hitanay ny fomba fijerinao ny zava-misy ankehitriny.
Ao anatin'ny adihevitra eo amin'ny ekipa tonga lafatra, na ny MacBook, ny MacBook Air na ny MacBook Pro, azontsika atao ny manamafy, araka ny nantenaintsika, fa samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy ny tsirairay.
Toy ny fandalinana rehetra, ny zavatra apetrak'i Chambers voalohany dia ny masonkarena fandrefesana. Ho an'ity, ireto ny famaky telo lehibe amin'ny fanabeazana:
Fifanarahana finday miaraka amin'ny peripheraly toy ny écran, projecteur sns.
La Ny tsy fitovizan'ny fitaovana sy ny fitoniana.
Ny vidiny raha oharina amin'ny fiasa.
Andao hojerentsika ny tsirairay amin'izy ireo:
1 Fifanarahana finday miaraka amin'ny peripheraly
2 Ny tsy fitoviana sy ny fahamarinan-toerana ny Hardware.
3 Ny vidiny raha oharina amin'ny fiasa.
Fifanarahana finday miaraka amin'ny peripheraly
Ny tena mampiavaka azy dia ny fifandraisana ananan'ny ekipa tsirairay sy ny toetran'ny peripheral. Ny MacBook sy MacBook Pros anio dia miankina betsaka amin'ny USB-C. Mifanohitra amin'izany, ny MacBook Air, mitazona ny USB-A.
USB-C no ho avy ary ny mety arosony dia toa lojika ny hisafidy an'ity fifandraisana ity. Saingy tsy izao no an'ny peripheraly maro toy ny mpanonta desktop. Afaka mitodika any amin'ny adaptatera foana ianao, fa raha Macs be dia be no tadiavinao toy ny sekoly dia mety ho lehibe ny fandaniana be loatra.
Ny tsy fitoviana sy ny fahamarinan-toerana ny Hardware.
Vaovao tsy voatery ho tsara kokoa. Saingy miankina amin'ny fomba fampiasantsika azy indray mandeha io. Ohatra, ny MacBook sy MacBook Pros vaovao mitondra ny kitendry lolo mahafinaritra. Ity fitendry ity dia miteraka olana raha vao misy zavatra kely miditra eo anelanelan'ny fanalahidy. Mety hiteraka tsy famporisihana ireo solosaina ireo hampiasa mavesatra an'ireo mpampiasa maro samihafa.
Toa ny mividy Mac misy fampisehoana avo lenta tokoa no tsara indrindra, mba tsy ho lany ny fampisehoana amin'ny hetsika rehetra, amin'ny ankehitriny na ho avy. Saingy tsy marim-pototra foana ny mividy MacBook Pro Retina maro, raha toa ny fampiasana ilay fitaovana ho an'ny fanovana an-tsoratra, famerenana amin'ny horonan-tsary sns.
Ho famaranana, ny fitantanana ekipa amin'ny fanabeazana dia tsy tokony ho samy hafa be amin'ny fisafidianana Mac ho an'ny tena manokana. Mazava ho azy, tsy maintsy hitantsika fa ny fampiasam-bola dia natao ho an'ny vondrona iray ary farito rehefa mividy fitaovana ho an'ny mpianatra mihoatra ny 50 ianao, dia zavatra sarotra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Inona avy ireo Mac be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny fanabeazana?